Sina Oliva, plum, bayberry, paiso, apricot, milina fanodinana plum ary orinasa mpamokatra sy mpamokatra | Hanketo
Oliva, plum, bayberry, paiso, apricot, milina fanodinana plum ary tsipika famokarana
Oliva, plum, bayberry, paiso, apricot, masinina fanodinana plum ary fonosana famokarana: tavoahangy fitaratra, tavoahangy plastika PET, fantsom-bokotra, fonosana malefaka aseptika, baoritra biriky, baoritra ambony azo zahana, kitapo aseptika 2L-220L amin'ny amponga, baoritra fonosana, kitapo plastika, lata lata 70-4500g.
Ny oliva, plum, bayberry, paiso, apricot, milina fanodinana plum ary tsipika famokarana dia mety amin'ny fanodinana oliva, plum maitso, bayberry, paiso, apricot ary plum. Izy io dia afaka mamokatra ranom-boankazo, ranom-boasary, pulp tany am-boalohany, ranom-boankazo, pulp mifangaro, vovoka voankazo,jamam-boankazo, vinaingitra voankazo ary vokatra hafa.
Oliva, plum, bayberry, paiso, apricot, milina fanodinana plum ary tsipika famokarana no tena milina fanadiovana, ascenseur, UV sterilizer, remover nokleary, beater, degasser, homogenizer, sterilizer ary milina famenoana, Printer Inkjet, milina famonosana, masinina famehezana , milina famonosana, milina fanoratana, masinina fanoratana, masinina fanasan-tavoahangy, masinina tavoahangy thermosetting, sterilizer tavoahangy mihodina, sterilizer fandroana rano, fantsom-panafody, fantsom-panafody, milina famenoana mafana, milina famenoana mangatsiaka, vilany fanamorana, vilia fanamafisam-peo, milina fonosana banga, sterilizer tubular, sterilizer lovia, sterilizer fantsom-bozaka, sterilizer casing, RO rafitra rafitra rano madio osmosis, rafitra fanadiovana eo an-toerana CIP, lozisialy sy press press sivana. Ny famokarana tsipika manana mandroso famolavolana hevitra sy avo lenta ny mandeha ho azy; ny fitaovana lehibe dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony avo lenta, izay mahafeno tanteraka ny fepetra takiana amin'ny fahadiovana amin'ny fikarakarana sakafo.
* Fahaiza-manao fanodinana 3 taonina / isan'andro ka hatramin'ny 1500 taonina / andro.
* Afaka manodina toetra mampiavaka ny voankazo, toy ny blueberry, blackberry, voaroy, frezy ary voaroy hafa.
* Voankazo vaovao sy voankazo mangatsiaka
* Ny ranom-boankazo misy ranom-panafody, azota dia mety ho fenoina amin'ny fiarovana, fanoherana ny okididia; Ny tahan'ny jus, ny kalitaon'ny ranom-boankazo dia tsara.
* Ny fametrahana pasteurization dia afaka mitazona tsara ny loko sy ny fofon'ny voankazo tany am-boalohany
* Amin'ny alàlan'ny hydrolysis enzima sy ultrafiltration, hahazoana vokatra ranom-boankazo mazava sy azo zahana.
* Haavo avo lenta amin'ny automatisation an'ny tsipika iray manontolo, nefa tsy mampiasa mpiasa betsaka.
* Tonga miaraka amin'ny rafitra fanadiovana, mora diovina.
Previous: Blueberry, blackberry, mulberry, frezy, raspberry, bayberry mena, milina fanodinana cranberry ary tsipika famokarana
Manaraka: Apple, poara, voaloboka, masinina fanodinana ampongabendanitra ary tsipika famokarana
Masinina fanodinana saosy karaoty
Masinina fanodinana saosy Pesto
Mametaka voatabia, milina fanodinana sakay an ...
Mangaha, mananasy, papay, milina fanodinana zezika ...